Semalt: कसरी WordPress प्लगइन्स काम गर्दछ
तपाईंको आफ्नै WordPress प्लगइन सिर्जना गर्नु त्यति गाह्रो छैन, र यसले तपाईंको साइटका विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ। कोडहरू प्रतिलिपि गर्ने, सम्पादन गर्ने र टाँस्ने काम पर्याप्त छैन किनकि तपाईंले वर्डप्रेस प्लगइनहरू कसरी काम गर्ने भनेर बुझ्नुपर्दछ र कसरी त्यांना कार्यहरू।पीपीपी फाइलमा अपडेट गर्ने भन्ने हुन्छ। प्लगइन तपाईंको साइट अनुकूलित गर्न को लागी एक सुरक्षित तरीका हो।
Semalt बाट शीर्ष विशेषज्ञ जेसन एडलर आश्वासन दिन्छन् कि यो तपाइँको WordPress प्लगइनहरूको साथ सुरू गर्न एकदम सजिलो छ, र तपाइँ कसरी काम गर्नुहुन्छ भनेर थाहा पाउनुहुनेछ। वर्डप्रेस प्लगइनहरू PHP स्क्रिप्टहरू वा कोड हुन् जुन तपाईंको साइटको सजावट, रूप र समग्र लोडिंग समयलाई बदल्न सक्दछन्। तिनीहरूले हुकहरूको साथ पूर्ण प्रकार्य प्रदान गर्दछन्, र त्यसैले किन वर्डप्रेस प्लगइनहरू कार्य गर्दछन् भनेर बुझ्न प्रत्येक ब्लगर र वेबमास्टरको लागि आवश्यक छ। विषयवस्तुहरू तपाईंको कार्यक्षमता थप्न र तपाईंको साइटमा हेर्नको लागि जस्तै वर्डप्रेस प्लगइनहरूले तपाईंको वेब पृष्ठहरूको प्रदर्शन बढाउँछन्।
१. FTP तपाईंको वेबसाइटमा
सबैभन्दा पहिले तपाईंले बुझ्नु पर्ने कुरा भनेको FTP ले कसरी काम गर्दछ, र यो एक विशिष्ट FTP प्रोग्राम प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै कोडा। यदि तपाईंलाई FTP का बारे केही थाहा छैन भने, हामी तपाईंलाई यो चरण बिर्सनु हुन्छ र अर्को चरणमा अगाडि बढ्न सुझाव दिन्छौं।
२. तपाईंको WordPress प्लगइन फोल्डरमा नेभिगेट गर्नुहोस्
एक पटक तपाईले FTP को माध्यम बाट वेबसाईटमा पहुँच प्राप्त गर्नु भएपछि, अर्को चरण भनेको WordPress प्लगइन फोल्डरमा नेभिगेट गर्नु हो। यो फोल्डर / wp-सामग्री / प्लगइन सेक्सनमा अवस्थित छ र पत्ता लगाउन सजिलो छ।
A. प्लगइनका लागि नयाँ फोल्डरहरू सिर्जना गर्नुहोस्
प्रत्येक प्लगइनका लागि तपाईले सिर्जना गर्नु हुन्छ, छुट्टै फोल्डर सिर्जना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यो सिर्जना गर्न सजिलो छ, र तपाईं केवल WordPress ड्यासबोर्ड मा जानु पर्छ र तपाईंको फोल्डरको नाम प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ। अनुमान गर्न गाह्रो वा ड्यास, ठाउँ, सर्तहरू वा अन्य समान शब्दहरू घुसाउन आवश्यक छैन।
The. WordPress प्लगइनका लागि प्राथमिक PHP फाईल सिर्जना गर्नुहोस्
अर्को चरणमा, तपाईंले प्राथमिक फाईल सिर्जना गर्नुपर्नेछ, जुन तपाईंको WordPress प्लगइनको फोल्डर भित्रमा PHP फाईल हुनुपर्दछ। यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले यस फाइललाई उचित नाम दिनु भएको छ जस्तै मेरो-मात्र-प्लगइन।पीपीपी। एकचोटि तपाईंले यो नाम राख्नु भएपछि, फाइल सम्पादन गर्न नबिर्सिनुहोस् र विन्डो बन्द गर्नु अघि सेटि settingsहरू बचत गर्नुहोस्।
The. प्लगइनको जानकारी सेटअप गर्नुहोस्
अन्तिम र एक महत्त्वपूर्ण चरणहरू मुख्य फाईलमा तपाईंको प्लगइन जानकारी प्रतिलिपि गरेर टाँस्नु हो। तपाईंले निश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाईंले निम्न कोड फाईलमा डेट गर्नुभयो र सेटिंग्स बचत गर्नुभयो।
प्लगइन नाम: मेरो मात्र प्लगइन
प्लगइन यूआरआई: http://www.abcmywebsite.com/my-only-plugin
वर्णन: यो मेरो पहिलो वर्डप्रेस प्लगइन हो, र म यसलाई सिर्जना गर्न पाउँदा खुसी छु।
लेखक: मेरो नाम
यो कोड PHP टिप्पणी हो, जुन तपाइँको WordPress 'व्यवस्थापक सेक्सन मा सिधा देखा पर्दैन। जहाँसम्म, वर्डप्रेसले तपाईको प्लगइनको नाम आउटपुट गर्न यस कोड र सान्दर्भिक डाटा प्रयोग गर्दछ र तपाईंलाई अन्य प्लगइनहरूबाट पनि फाइदा लिन मद्दत गर्दछ। तपाईंले जानकारी पूर्ण रूपमा बुझ्नुपर्दछ र माथिको कोड याद गर्नुपर्दछ यदि तपाईं जान्न चाहानुहुन्छ कसरी WordPress WordPress प्लगइनहरू काम गर्दछन् र दैनिक आधारमा तिनीहरूको बहु कार्यहरू प्रदर्शन गर्दछ।